Ma waxaan ku noolnahay maalmihii la soo dhaafay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waad ogtahay injiilku inuu yahay warka wanaagsan. Laakiin dhab ahaan ma u tixgelisaa war wanaagsan? Sida intiinna idinka mid ah, noloshayda inteeda badan waxaa la i baray inaan ku nool nahay maalmihii la soo dhaafay. Tani waxay i siisay aragti adduunka ka eegaysa arrimaha marka loo eego adduunku in dhamaadka adduunku yahay sida aan ognahay in maanta ay imaneyso dhawr sano gudahood. Haddiise aan u dhaqmo sida saxda ah, waan ka badbaadi doonaa dhibaatada weyn.
Nasiib wanaagse, tanina maahan diirada iimaankayga Masiixiyiinta ama aasaaska cilaaqaadka aan la leeyahay Ilaah. Laakiin markii aad wax aamintay muddo dheer, way adagtahay in laga takhaluso gabi ahaanba. Nooca noocan ah ee aragtida adduunka ayaa noqon kara wax qabatin, sidaa darteed waxaad u muuqataa inaad aragto wax kasta oo ku dhaca muraayadaha fasiraadda gaarka ah ee dhacdooyinka dhammaadka. Waxaan maqlay in dadka loo dejiyey wax sii sheegidda dhammaadka wakhtiga ayaa lagu qoslay oo loogu magac daray aalkolool.
Xaqiiqda, si kastaba ha noqotee, kani maahan wax lagu qoslo. Noocan aragtida adduunku waxay noqon kartaa waxyeelo. Xaaladaha aadka u daran, waxay ku tijaabin kartaa dadka inay wax walba iibiyaan, iska daayaan dhammaan xiriirada, una guuraan meel cidlo ah oo sugaya iscasilaadda.
Badankeen inteena intaas ma tagi karno. Laakiin dabeecad ah in noloshu sidaan ognahay ay ku dhamaan doonto mustaqbalka dhow waxay dadka u horseedi kartaa inay qorto xanuunka iyo silica ku xeeran oo ay ka fikiraan: Waa maxay cadaabta? Waxay u eegaan wax walba oo hareerahooda ah qaab niyad jab leh waxayna noqdaan daawadayaal iyo garsoorayaal raaxo badan marka loo eego kaqeybgalayaasha ka shaqeeya hagaajinta waxyaabaha. Qaar ka mid ah balwadaha wax sii sheegta ayaa xitaa taga illaa ay diidaan inay taageeraan dadaalka gargaarka samafalka sababtoo ah waxay u maleynayaan inay haddii kale dib u dhigi karaan waqtiyada dhamaadka siyaabo uun. Kuwo kale waxay dayacayaan caafimaadkooda iyo carruurtooda waxayna illoobaan dhaqaalahooda maxaa yeelay waxay aamminsan yihiin inaysan jirin mustaqbal ay ku qorsheeyaan.
Kani maahan habka loo raaco Ciise Masiix. Wuxuu noo yeedhay si aan u noqonno iftiinka adduunka. Nasiibdarro, qaar ka mid ah nalalka Masiixiyiinta ayaa umuuqda kuwo u eg kuwa nalka tooska ee helikabtar booliis oo gaaf wareegaya xaafadaha si ay ula socdaan dambiyada. Ciise wuxuu rabaa inaynu noqonno iftiiminno dareenka ah inaan gacan ka geysaneyno inaan ka dhigno adduunkan meel wanaagsan oo loogu talagalay dadka nagu wareegsan.
Waxaan rabaa inaan ku siiyo aragti ka duwan. Maxaan u aaminsanahay inaan ku nool nahay maalmaha ugu horreeya halkii maalmihii ugu dambeeyay?
Ciise nama uusan barin in aan ku dhawaaqo cadaabka iyo mugdiga. Wuxuu na siiyay farriin rajo. Wuxuu noo sheegay inaan u sheegno adduunka in noloshu ay kaliya bilow tahay halkii la koobiyeyn lahaa. Injiilku wuxuu ku saabsan yahay isaga, cidda uu yahay, waxa uu qabtay, iyo waxa suurogal ah taas aawadeed. Markii Ciise xabaashiisii ​​ka soo xoomay, wax walba way is beddeleen. Wax walba wuu cusboonaysiiyay. Isaga xaggiisa ayuu Ilaah soo furtay oo la heshiisiiyay wax kasta oo jannada ku jira iyo waxa dhulka joogaba (Kolosay 1,16: 17).
Muuqaalkan cajiibka ah waxaa lagu soo koobay waxa loogu yeero aayadda dahabiga ah ee Injiilka Yooxanaa. Nasiib darrose, aayaddan si fiican ayaa loo ogaa in awoodeedii ay noqotay mid caajis ah. Laakiin dib u fiiri aayaddan. Si tartiib ah u dheefso oo u oggolow xaqiiqada la yaabka leh inay runtii ku dhex gasho: Sababtoo ah Ilaah wuxuu dunida u jeclaaday inuu siiyo wiilkiisa keliya oo dhashay si kuwa isaga rumaystaa aysan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah. (Yooxanaa 3,16).
Injiilku ma ahan fariin cadaab iyo cadaab ah. Ciise wuxuu cadeeyay tan aayadda soo socota: Sababta oo ah inuusan Ilaah wiilkiisa u soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiinse wuxuu u badbaadin doonaa isaga xaggiisa (Yooxanaa 3,17).
Ilaah wuxuu u soo baxay inuu badbaadiyo adduunka, oo uusan burburin. Taasina waa sababta ay noloshu u muuqanayso rajo iyo farxad, ee ma aha rajo xumo iyo cabsi cabsi gelin. Ciise wuxuu ina siiyay faham cusub oo ah waxa ay dadku noqon karaan. Ka fog in lagu jiheeyo gudaha, waxaan ku noolaan karnaa wax-soo-saar iyo qaab-dhismeed adduunkan. Haddii aan fursad helno, waa inaan qof walba wanaag u qabanaa, gaar ahaan kuwa iimaankeenna ku jira (Galatiya 6,10). Dhibaatada ka jirta Dafur, dhibaatooyinka soo ifbaxaya ee isbedelka cimilada, colaadaha ka socda Bariga Dhexe iyo dhammaan dhibaatooyinka kale ee ku dhowda gurigeenna waa arrinteenna. Mu'miniin ahaan, waa inaan is is ilaalinaa oo aan sameyn karnaa wax walba oo aan awoodno si aan u caawino - oo aannaan fadhiyin dhinac dhinacna uga istaagno oo aan si qiiro leh noogu sheegno: waan kuu sheegnay.
Markii Ciise laga sara kiciyey kuwii dhintay, wax waliba way beddeleen - dadka oo dhan - ha noqdeen hadday yaqaaniin iyo haddii kale. Shaqadeena waa inaan sameyno intii karaankeena ah si dadku ogaadaan. Ilaa adduunyada sharku imanayo ay wakhtigeeda qaadato, waxaan wajihi doonnaa mucaarad iyo mararka qaar xitaa cadaadis. Laakiin weli waxaan joognaa maalmihii hore. Iyada oo la fiirinayo weligeednimada soo socota, Labadan kun oo sano ee ugu horreysay ee masiixiga ayaa ah isha oo keliya.
Mar kasta oo xaaladdu qatar gasho, dadku si la fahmi karo waxay u maleynayaan inay ku noolaayeen maalmihii la soo dhaafay. Laakiin khataraha adduunka ayaa yimid oo soo socday laba kun oo sano, iyo dhammaan Masiixiyiintii runtii hubaa inay ku noolaayeen xilliyadii ugu dambeeyay way qaldameen - waqti kasta. Eebbe nama uusan siinin waddo hub ah oo lagu saxayo.
Laakiin wuxuu inagu siiyey injiil rajo ah, kaas oo ah injiilka waa inuu dadka oo dhan ogeysiiyo. Waxaan leenahay mudnaan inaan ku noolaano maalmaha ugu horreeya ee abuurista cusub ee bilaabatay markii Ciise ka soo sara kacay kuwii dhintay.
Waxaa qoray Yuusuf Tkach